Time Relay၊ လျှပ်စစ်သံလိုက် Relay၊ လျှပ်စစ်ကွန်ယက်၊ Power Relay - NAIDIAN
Contactor အမျိုးအစား Relay
HH54PL HH52PL HH53PL
သုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရောင်းချမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပါ ၀ င်သောပညာရှင်များသည် relay အမျိုးအစားအားလုံး။
နည်းလမ်းများစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ PARTNER နိုင်သလား
မှသိသာထင်ရှားသောအမြတ်အစွန်းရရှိစေသည့် ၀ ယ်ယူမှုကိုကူညီရန်ဖြစ်သည်။
NDD3 series အသိဉာဏ်ရှိသောစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းမော်တာကာကွယ်သူ
Naidian Relay တည်ငြိမ်သောလက်ရှိ relay JL-11A 220V ...
စျေးပေါစျေးနှုန်း SPDT 24-240VAC / DC နှောင့်နှေးအပေါ် 0.5S-100 ...
အရည်အသွေးကောင်း RST25 အီလက်ထရောနစ်ဗို့အားကာကွယ်မှု ...
Naidian Multi Time အထွေထွေအလိုအလျောက်အချိန် Switc ...
Naidian TM619 နာရီအပတ်စဉ်သက်တမ်း
Naidian အပတ်စဉ် Programmable Timer DHC15A
Naidian အဖြူရောင်အရောင် 12V 24V ဒီဂျစ်တယ်အချိန် Relay ...
အရည်အသွေးကောင်း 220VAC REX-C700 J အမျိုးအစားအပူချိန် ...
C series temperature contro...
ကောင်းသောအရည်အသွေး3အဆင့် Multi-function ကိုကြိမ်နှုန်း: D ...
Naidian GKR-02 Voltage Monitoring Device Relay
Naidian Home Line Protector NDD5-K
NDD5-K အိမ်လိုင်းကာကွယ်မှု ...
Naidian MK-01 အဆင့်ပျက်ကွက်မှုထပ်ဆင့်လွှင့်သူ
အဆင့်ပျက်ကွက်မှုကိရိယာများ MK-01 ...
Naidian Motor Reverse Relay၊ အကာအကွယ် Relay J ...
Naidian မော်တာ Reverse Relay ...
NAIDIAN GROUP ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး High-Power Relay၊ General-Relay၊ Time Relay နှင့် Electromagnetic relay ကဲ့သို့သောထပ်ဆင့်လွှင့်သူများအားသုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရောင်းချမှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှတ် (၆၆၆)၊ ချန်ဇန်လမ်း၊ လျူရှီရပ်ကွက်၊ ၀ င်းဇူးမြို့၊ Zhejiang၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီးအဆင်ပြေသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လှပသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စဉ်းစားဟန်ရှိသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအထူးပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
/ပြီ / ၂၇ / ၂၀၂၀
ချစ်ခင်ရပါသောမိတ်ဆွေများ၊ အလုပ်သမားနေ့ရောက်လာပါပြီ ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကောင်စီ၏ပြဌာန်းထားသောရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်ဌာန၏အခြေအနေများအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမျိုးသားနေ့အားလပ်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသိပေးကြေငြာသည်။ ၁။ ၃ ရက်ရုံးပိတ်ရက်များအတွက်ယူနစ်နှင့်မေလ ၄ ရက်ပုံမှန်အလုပ်။ ..
/ပြီ / 20/2020
control motor ၏ ac contactor coil voltage အရ၊ ရွေးချယ်ထားသော protector ၏အလုပ်လုပ်သော voltage သည် ac contactor coil voltage နှင့်တသမတ်တည်းဖြစ်သင့်သည်။ ထုတ်လုပ်မှု၏စီးရီး ...
/ပြီ / 01/2020
ချစ်သူတို့သင်္ချိုင်းကိုသုတ်သင်မည့်နေ့ရောက်လာပြီ ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကောင်စီ၏ပြဌာန်းထားသောရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်ဌာန၏အခြေအနေများအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အမျိုးသားနေ့အားလပ်ရက်နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အသိပေးကြေငြာသည်။ ၁။ holidayပြီ ၄ ရက်၊ 5ပြီ ၅ ရက်၊
ဖေဖော်ဝါရီ / 24/2020
ချစ်ခင်ရပါသောဖောက်သည်များ - ပထမ ဦး စွာ၊ 2019 နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအားသင်၏ကြီးမားသောပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုသည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာချီအတိုင်းအတာဖြင့်ကူးစက်ရောဂါများစွာနှင့်အတူပြင်းထန်သောစစ်ပွဲတစ်ခုသို့ဆွဲဆောင်လိုက်သည်။ ယခင်ကမသိသောဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုး၏ရုတ်တရက်နှင့်မကြုံစဖူးတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ / 20/2020
Congratulations on our company become Alibaba Verified Supplier on 28th March.2019, and we hope to continue to establish close relations with our new and old customers. What is Verified Supplier*? A Verified Supp...
© Copyright - 2010-2021 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု: globalso
Featured ထုတ်ကုန်များ - Sitemap - Mobile Site